China Flue Gas Desulfurization mgbapụta factory na suppliers | Ngwa Delin
Hebei Delin Machinery bụ otu n'ime ndị kasị ibu mgbapụta ụlọ ọrụ pụrụ iche na n'ichepụta slurry nfuli na China, na ala ebe nke ihe karịrị 40,000m2 na ebe a na-ewu ihe karịrị 22,000m2. A na-ejikarị ngwaahịa ndị a eme ihe maka ntụgharị nke mmiri, ngwuputa, metallurgy, atụmatụ obodo, ike, kol, FGD, mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, imepụta ihe eji eme ụlọ, wdg. mmiri, otu-ogbo na na kehoraizin Ọdịdị, featuring uru nke sara eruba ọnụego, elu arụmọrụ na ume-azọpụta. FGD mgbapụta usoro nke kọmpat imewe na ohere-ichekwa. Dị ka ọkachamara slurry mgbapụta emeputa na soplaya na China, anyị mepụtara a dịgasị iche iche nke ihe maka DSC (R) usoro FGD nfuli.